တရုတ်အားအဆင့်မြှင့်တင်ပြီးအားကောင်းသောအီလက်ထရောနစ် Mouse Repeller Squirrel Repellent ကြွက်ဆန့်ကျင်ခြင်သတ်ဆေးဖျက်ပိုးမွှား Repeller ခြင်ငြင်းပယ်ထိန်းချုပ်ထောင်ချောက်စက်ရုံနှင့်ထုတ်လုပ်သူများ | Jinjiang
အဆင့်မြှင့်တင်ထားသောအားကောင်းသောအီလက်ထရောနစ် Mouse Repeller Squirrel Repellent ကြွက်ဆန့်ကျင်ခြင်သတ်ဖြတ်သူပိုးမွှား Repeller ခြင်ငြင်းပယ်ထိန်းချုပ်ထောင်ချောက်
ဇာစ်မြစ် - ဂွမ်ဒေါင်း၊
ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည်: DY, DY
ပိုးမွှားအမျိုးအစား: ပုရွက်ဆိတ်များ၊ ပျားများ၊ ပိုးတောင်မာများ၊
စွမ်းရည်: 1, 100000 - 1000000
ဒီဇိုင်း - ပုံမှန်
အကျယ်တ ၀ င့်အကျယ် ၁၀၀ - ၁၅၀ စတုရန်းမီတာရှိသည်
အသုံးပြုသည့်အချိန် -> နာရီ ၄၈၀
အသုံးပြုခြင်း - တိရိစ္ဆာန်ထိန်းချုပ်ခြင်း၊ လယ်ယာ၊ အင်းဆက်ပိုးမွှားထိန်းချုပ်ခြင်း၊ ခြင်ဆေးထိုးသည့်လက်ကောက်၊ ခြင်ဆေးထိုးသည့်စတစ်ကာ၊ စက်ရုံ၊ ဥယျာဉ်၊ အိမ်နှင့်ပတ် ၀ န်းကျင်၊ အိမ်နှင့်ပတ် ၀ န်းကျင်၊ သန့်ရှင်းရေး၊ အနံ့ဖယ်ရှားခြင်း / ဖယ်ရှားခြင်း၊ မုန့်ဖုတ်ခြင်း၊
အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်:> 30 ကိုအပိုင်းပိုင်း
ပါဝါထောက်ပံ့ရေး: Built-in အားပြန်သွင်းနိုင်သည့်ဘက်ထရီ
ပုံစံ - Luxe
အသုံးပြုမှု: အဆင့်မြင့် Ultrasonic ကြွက်တွန်းလှန်စနစ်
အခါသမယ: ပါတီ, မင်္ဂလာဆောင် & စေ့စပ်, မင်္ဂလာဆောင်, ကျောင်းဆင်းပွဲ
လိုအပ်သည့်ဘက်ထရီများ - မရှိပါ
ကိုယ်ပိုင်အမှတ်တံဆိပ် - ဟုတ်တယ်
လျှောက်လွှာ: ရုံး၊ အိပ်ခန်း၊ Living ည့်ခန်း၊ မီးဖိုချောင်၊ Ind ည့်ခန်း၊ အပြင်ပိုင်း၊ အဝတ်လျှော်areaရိယာ၊ လသာဆောင်၊ ထမင်းစားခန်း၊ ရေချိုးခန်း၊
ဟုတ်ကဲ့။ Smart Device လား
ရာသီ: A / W
ထောက်ပံ့နိုင်စွမ်း - တစ်နေ့လျှင် 1000 Piece / Pieces
အရေအတွက် (အပိုင်းအစများ) ၁ - ၄ ၅ - ၁၀ > 10
အီးအက်စ်တီ။ အချိန် (နေ့များ) 8 15 ညှိနှိုင်းခံရဖို့
ငွေပေးချေမှုသတ်မှတ်ချက်များ: L / C; D / A; D / P; T / T; Western Union, MoneyGram
Supply နိုင်ခြင်း: တစ်နေ့လျှင် 1000 Peice / Peices
နာမည် အဆင့်မြင့် Ultrasonic ကြွက် repelling စနစ်
[Rodent Repelling ထံအပ်နှံ] - စျေးကွက်ရှိအခြားပိုးမွှားကောင်များနှင့်မတူဘဲကျွန်ုပ်တို့၏ ultrasonic mouse ကိုတွန်းလှန်ခြင်းသည်ကြွက်များ၊ ကြွက်များ၊ ရှဥ့်များနှင့်အခြားကြွက်များကိုပစ်မှတ်ထားရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ကြွက်များ၏ထိန်းချုပ်မှုသည်အကောင်းဆုံးရလဒ်ရရှိလိမ့်မည်။
[Twin Mode Operation] - Ultrasonic rodent repellent သည်နောက်ဆုံးပေါ် smart chip ကိုအသုံးပြုသည်။ ၎င်းတွင် mode နှစ်ခုလည်ပတ်သည်။ ကွဲပြားသော modes များသည်အသံလှိုင်းအမျိုးမျိုးကိုထုတ်လွှတ်သည်။ ကြွက်တွန်းလှည်းမှအသံလှိုင်းများသည်မောက်၏ tory စနစ်နှင့် ဦး နှောက်ကိုသုံးရန် ဦး နှောက်၊ ကြွက်၊ ကြွက်၊ အခြားကြွက်များသည်သင့်အသံကိုမခံနိုင်အောင်သင့်အိမ်မှထွက်ခွာနိုင်သည်။
[100% လူသားများနှင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များအတွက်ဘေးကင်းလုံခြုံမှု] - ဓာတုပစ္စည်းများမရှိ၊ သတ်ဖြတ်ခြင်းမရှိ။ ဒီ Ultrasonic ကြွက်တွေကို ABS မီးလျှံနှောင့်နှေးစေသောပစ္စည်း၊ ကြာရှည်ခံမှုနှင့်ပတ် ၀ န်းကျင်နှင့်သဟဇာတဖြစ်စေမှုတို့ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ သင့်ကလေးများနှင့်အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်များကိုမထိခိုက်စေပါ။ တိရိစ္ဆာန်များသာသူတို့ကိုသင့်အိမ်မှထွက်သွားစေပါ။
[ကျယ်ပြန့်သောထိရောက်သောလွှမ်းခြုံမှု] - ကျွန်ုပ်တို့၏ကြွက်များအားတွန်းလှန်နိုင်သည့်အကွာအဝေးမှာ ၁၅၅၀၀၀ စတုရန်းလက်မဖြစ်သည်။ အိပ်ခန်းကျယ်၊ မီးဖိုချောင်၊ ခန်းမ၊ ဂိုဒေါင်များ၊ ရုံးခန်းများ၊ ဟိုတယ်များစသည်တို့တွင်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသည်။ နံရံများနှင့်အစိုင်အခဲကိုထိုးဖောက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။
ကြွက်များသည်သင့်အိမ်၊ ဂိုဒေါင်၊ ဆိုင်သို့မဟုတ်ရုံးခန်းနေရာများကိုအမြဲတမ်းတိုက်ခိုက်လေ့ရှိသလား။ ရှဥ့်များသည်သင်၏အိမ်တွင်ဝါယာကြိုးများကိုကိုက်တတ်သလား။ ပြproblemနာမရှိပါ၊ သင့်အား၎င်းတို့အားသင်တိုက်ဖျက်ရန်ဆန်းသစ်သောတီထွင်မှုကိုကမ်းလှမ်းရန်အသင့်ရှိနေပြီဖြစ်သည် - ultrasonic mouse mouse repeller.The rodent repeller သည် ultrasonic လှိုင်းများကိုထုတ်လွှတ်သည် ကြွက်များကိုဝေးမောင်းနှင်နိုင်သောကွဲပြားခြားနားသောကြိမ်နှုန်း၏, ဒီစက်ကိုမည်သည့်အခန်းတွင်နေရာချခြင်းနှင့်အလုပ်အတွင်းအဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေပစ္စည်းများမသုံးပါ။
အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးစက်ပစ္စည်းများ - မီးဖိုချောင်ထဲထည့်သွင်းပါ
input ဗို့အား: 90V-250V
ပါဝါ - 4-6W
အရွယ်အစား: 92 * 73 * 6m
operating အပူချိန်: -15 Celsius -60 Celsius
အပူချိန်: -10 Clesius ~ 60 Celsius
operating စိုထိုင်းဆ: ညီမျှထက်နည်း 85% RH
Perating စိုထိုင်းဆ: ညီမျှထက်နည်း 85% RH
1. ကော်ဇော၊ အကန့်အသတ်များနှင့်ပိုးမွှားကောင်များ၏သက်ရောက်မှုကိုလျော့နည်းစေမည့်အသံစုပ်ယူနိုင်သောပစ္စည်းများနှင့်အကွာအဝေးကိုဝေးဝေးထားပါ။
2. Ultrasonic rodent repellent တွင် mode နှစ်ခုရှိသည်။ Mode1 (အဝါရောင်အလင်းဖြည်းဖြည်းချင်းမှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်), Mode2 (အနီရောင်နှင့်အဝါရောင်အလင်းများသည်တောက်တောက်မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်) ။ Mode 1 ကိုမကြားနိုင်သော်လည်းလူ့နားမှ Mode2ကိုကြားနိုင်သည်။ mode မှာတစ်ခုမှာအိမ်မှာရှိရင်သုံးမယ်။
၃။ ကြွက်တွန်းနေသောဆေးကိုသန့်ရှင်းစေရန်ခိုင်မာသောအရည်များ၊ ရေများသို့မဟုတ်စိုစွတ်သောအဝတ်များကိုမသုံးပါနှင့်။
Plug အမျိုးအစား - US Plug၊ ကနေဒါ၊ အိန္ဒိယ၊ ဂျပန်၊ မက္ကဆီကို၊ ထိုင်း၊ ထိုင်ဝမ်၊
1 * ကြွက် Repeller
အထက်ပါအထုပ်ပါ ၀ င်မှု၊ အခြားထုတ်ကုန်များမပါ ၀ င်ပါ။
မွတ္စု: အလင်းရိုက်ခြင်းနှင့်ကွဲပြားသောပြသမှုများသည်ရုပ်ပုံ၏အရောင်ကိုတကယ့်အရာနှင့်မတူသောအရောင်ဖြစ်စေနိုင်သည်။ တိုင်းတာခွင့်ပြုထားသောအမှားသည် +/- 1-3cm ဖြစ်သည်။
Q1: MOQ ဆိုတာဘာလဲ။
A1: 200PCS ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ရရှိနိုင်ဒီဇိုင်းများ။
A2: ဟုတ်ပါတယ်၊ အရည်အသွေးစစ်ဆေးပြီးစစ်ဆေးဖို့နမူနာမှာယူတာကိုကြိုဆိုပါတယ်။
A3: နမူနာသည် ၃-၅ ရက်ဖြစ်သည်။ ထုထည်ထည်ထုတ်လုပ်ချိန်သည်အော်ဒါအရေအတွက်ထက်ပိုသော ၂-၂ ပတ်ခန့်လိုအပ်သည်။
A4: ကျနော်တို့ပုံမှန်အားဖြင့် DHL, UPS, FedEx သို့မဟုတ် TNT ဖြင့်ပို့သည်။ များသောအားဖြင့် ၆ ရက်မှ ၉ ရက်အထိကြာသည်။ လေကြောင်းနှင့်ပင်လယ်ရေကြောင်းပို့ဆောင်ခြင်းကိုလည်းရွေးချယ်နိုင်သည်။
A5: ဟုတ်ကဲ့၊ ကျွန်တော်တို့ကိုထုတ်လုပ်ခြင်းမပြုမီတရားဝင်အသိပေးပါ။ ပထမဆုံးနမူနာကို အခြေခံ၍ ဒီဇိုင်းကိုအတည်ပြုပါ။
A7: သင်၏ပထမ ဦး ဆုံးသင်၏လိုအပ်ချက်သို့မဟုတ်လျှောက်လွှာကိုကျွန်ုပ်တို့အားအသိပေးပါ။ ဒုတိယအချက်မှာသင်၏လိုအပ်ချက်များသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့၏အကြံပြုချက်များအရကျွန်ုပ်တို့ကိုးကားပါသည်။ ဖောက်သည်ကတရားဝင်အမှာစာအတွက်ငွေပမာဏနှင့်နေရာချထားသည်ကိုအတည်ပြုသည်။ လေးကြိမ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ထုတ်လုပ်မှုကိုစီစဉ်သည်။
နောက်တစ်ခု: Sweettreats Energy Saving Ultrasonic ပိုးမွှားဖျက်စက်ပုရွက်ဆိတ်အိမ်သူအိမ်သားအီလက်ထရောနစ်ပိုးသတ်ဆေးကြွက်ကြွက်ထောင်ချောက်ပိုးမွှား
2020 ကုန်ပစ္စည်းအသစ် ultrasonic ပိုးမွှား repeller contr ...
2020 အမေဇုံအရောင်းရဆုံးအမြင့်ဆုံး Ultrasonic Pes ...
ပိုးမွှားထိန်းချုပ်မှု Ultrasonic Repeller အသစ် ...
အနိမျ့ပါဝါသံလိုက် Repeller အီလက်ထရောနစ် Ultrason ...